MacID inoramba ichiripo kunyangwe Apple ichiratidza Kugunzva ID kuvhura yako Mac | Ndinobva mac
MacID inoramba ichiripo kunyangwe Apple ichiratidza Kugunzva ID kuvhura yako Mac
Jesu Arjona Montalvo | | Mac App Store, Zvimwe Zvirongwa zveMac
Ndataura mazuva ano nezve mukana mukuru wekuti Apple ichatanga nzira nyowani yekuvhura yako Mac ine Kubata ID mune imwe inotevera vhezheni ye OS X. Kune avo vanoziva, izvi zvinogona kuitwa nechekare nekushandisa kweiyo App Store, se MacID, asi kana Apple ikaunza iyi ficha yekumisikidza kuisirwa OS X. Chii chichaitika kune izvi zvechitatu-bato kunyorera?.
Izvo hazvisati zvavepo hapana kusimbiswa kuti chimiro chakadai chakavimbiswa kusvika paMac, sezvo chisiri chinhu chinopfuura a rumor, uye nokutendeseka isu pamwe hatizomboziva zvechokwadi kusvika iyo WWDC 2016, uye Apple inozivisa yayo nyowani OS X. Kune rimwe divi, ngatitii kufungidzira Apple inosuma chiitiko ichi. Maitiro echitatu-bato anoita zvinhu zvakafanana angakanganiswa sei?.
Kunyangwe vanhu vazhinji vachataura kuti ivo vanozongotanga kushandisa yakavakirwa-mukati OS X uye iOS ficha pane yechitatu-bato maapplication kuvhura yavo Mac neTouch ID, kuchine vamwe maficha achaita mutsauko nechinotevera chizvarwa chebasa iro Apple rinogona kusanganisa.
Somuenzaniso, MacID iyo inogona kutengwa muApp Store ye 3,99 €, ine hunhu hwakati wandei nezve ramangwana Bata ID izvo zvisina kutaurwa mumakuhwa aripo, uye izvo zvingangodaro zvisina kuiswa mune kumwe kuitisa kwesisitimu pachayo Bata ID kubva kuApple yeMac makomputa.
Dai Apple yaizokutendera kuti uzarure Mac yako neiyo Touch ID sensor uchishandisa bluetooth kubatana, uye wafunga kurega kushandisa MacID zvachose, iwe unenge uchiri kushayikwa pazvinhu zvakasiyana zvinoitwa nevechitatu bato seMacID sekupa se:
Inoshanda nemaMacs akawanda, zvishandiso zveIOS, uye Apple Watch kamwechete.
Vhura yako Mac uchishandisa Kubata ID, ine passcode, Apple Watch, kana nePebble.
Inopindirana notices dzinoita kuti iwe usatombofanirwa kuvhura yako iOS chishandiso.
Chengetedza yako Mac odhiyo, inoshanda neTunes uye Spotify.
Nemaoko vhara yako Mac, kana tanga iyo saver yekure kure.
Auto-kukiya kana chishandiso cheIOS chichienda kure neMac yako.
Kusvika pairi kunozvivhura pachako paunodzokera kuMac yako.
Bata mapfupi e3D.
Widget muNotification Center.
Sarudza kubva pakusanganiswa kwemavara.
Ini ndinoshandisa MacID kubvumidza mabasa anoda password yemutungamiri mune yako OS X. (Chete zveakaundi account)
MacID yeOS X haimbofi yakabatana neInternet pasina mvumo yako.
Yako OS X password haina kupihwa uye haina kumbosiya Mac yako.
Zvinoshamisa nyore kushandisa, asi zvakazara nezvinhu uye nesarudzo.
Iyo rondedzero inoenda kuratidza kuti kunyangwe Apple ichibatanidza chimiro che Bata ID pane yako Mac, kuchine tani yezvinhu zvinotyisa zvinotorwa MacID, nekuti rondedzero iri pamusoro yakakura mukuita basa.
Mwanakomana zvakaisvonaka maficha Pasina kuwedzeredza kunyangwe akareruka mashandiro, uye iyo yekubata ID iyo Apple inogona kuitisa haingauye nemazhinji maficha uye mushandisi masetani seMacID anayo.
Kazhinji, maitiro akajairika aApple kuita chimwe chinhu chinosangana ne nzira yekudzikama uye nyore kushandisa. The vepamberi vashandisi vanoda zvimwe sarudzo zvekumisikidza kazhinji zvine hunhu, vanosara vari murima netariro yekuti iyo vashanduri vekushandisa vanogona kusangana nekuzadzisa zvaunoda.
Kubata ID kugona kukuru, uye ndinofunga Apple yatanga kungo pinda mune yayo kugona. Kugunzva ID kunogona kuburitswa kubva kumadivaysi eIOS nemamwe maApple maApple pane imwe nguva, asi yechitatu-bato masevhisi anogona kutungamira kune zvirinani kuve nechokwadi tora chakanakisa mushandisi chiitiko.
Para Kane mushambadzi weMacID, hausi iwo mugumo wenyika kunyorera kwako, kubvira zvakadaro ronga kuramba uchitsigira nezvinhu zvitsva, kunyangwe Apple ichiunza zvinhu izvi kuMac mune nyowani OS X 10.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » MacID inoramba ichiripo kunyangwe Apple ichiratidza Kugunzva ID kuvhura yako Mac
Apple inogona kuburitsa MacBook Pro nyowani neTouch ID uye yekubata bar ine OLED skrini
Chekutanga Apple Chitoro muBrooklyn Yakasimbiswa neApple Jobho Zvikumbiro